Prateek Daily: स्वान्त सुखाय
Showing posts with label स्वान्त सुखाय. Show all posts
होलीको उल्लासमा कोरोनाको प्रतिबन्ध
on 10:42:00 PM0Comment
यस वर्षको होलीको हल्ला नै फिक्का भएको छ । होलीलाई उमङ्ग र उत्साहको निर्बन्ध पर्व मानिन्छ । यसमा रमाइलोको कुनै सीमा हुँदैन । आप्mनो सीमा र बन्धन अर्थात् मर्यादाभित्र होली स्वच्छन्द पर्व हो । यसले खान र पिउनमा कुनै किसिमको सम्झौता गर्दैन । यस पर्वमा आप्mनो स्वास्थ्यले साथ दिने सीमासम्म पुगेर मानिसले खानपानको स्वाद र सन्तुष्टि लिन्छन् । पर्वहरूमा यो यस्तो पर्व हो, जसमा खानपानको दृष्टिले एक वर्षमा सबैभन्दा उत्कर्ष होओस् र अर्को वर्षको भन्दा अझ एक कदम अगाडि रमाइलो होओस् भन्ने चाहना हुन्छ । यस पर्वले बालकदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्ममा उल्लास थप्छ । वास्तवमा वसन्त आएको मनमा अनुभूति थप्छ ।
होलीको समयमा आफन्त र नजीकका मानिसहरू एक ठाउँमा भेला हुन्छन् । रङ्ग हाल्छन् र अबिर दल्छन्। कतिपयले रङ्गलाई छालाको स्वास्थ्य राम्रो हुने र कतिपयले छालालाई हानि गर्ने दुई ध्रुवको विचार पोख्छन् । अबिरको सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ । कतिपयलाई रङ्ग र अबिरको एलर्जी हुन्छ । कतिपयलाई होलीमा निर्बन्ध हुने खानपानले हानि गरेको पनि पाइन्छ । होलीको दिन वा भोलिपल्ट अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको सङ्ख्या बढी हुन्छ । प्रायः समस्या खानपानसितै सम्बन्धित हुन्छन् । होलीको दिन जे पनि खाने र जति पनि खाने वा पिउने गर्नाले समस्या बढेको हुन्छ । खानुभन्दा पहिले अपनाउने सावधानी र खानापछि पनि अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा खाना खानेबेलामा अपनाउनुपर्ने सावधानीको जानकारीको अभाव, लापर्बाही वा आपूmमाथि अत्यधिक विश्वासले गर्दा स्वास्थ्य समस्या आउने गरेको छ । अझ समूहमा हुने खानपानको समयमा उमेर मिल्दा साथीहरूले दिने दबाबले गर्दा पनि स्वास्थ्यमा समस्या पर्ने गरी खानपिन गर्दछन्, मानिसहरू । यस प्रकारका खानपिनमा उमेरले पनि छेक्दो रहेनछ ।
होली वास्तवमा समूहगत पर्व हो । मानिसहरू समूहमा रङ्ग, अबिर खेल्ने तथा गीत गाउने र नाच्ने गर्दछन् । यो एक्लै रमाइलो गर्ने पर्व होइन । समूहमा रमाइलो गर्ने पर्व भएको र सामूहिकता पनि यसको विशिष्टता भएको सन्दर्भमा होलीको ठीक मुखैमा अनेक किसिमका त्रास पैmलिएका छन् । सबैतिर कोरोना भाइरसको त्रासले अधिकांश स्थानीय तह तथा विभिन्न प्रमुख व्यक्ति वा पदासीनले मनाउने गरेको होलीमिलन समारोहलाई स्थगित गरेका छन् । सबैतिरबाट समूहमा कार्यक्रमहरू नगर्न सूचना, जानकारी वा सल्लाह आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र मानिसहरूको जमघट हुने सबै ठाउँमा कोरोनाकै चर्चा चलिरहेको छ । यसको सतर्कताको लागि जनचेतनाको दृष्टिकोणले ठीक हो र तयारी गर्ने किसिमले पनि उचित हो । हामी त कुरा बढी गर्ने र काम कम गर्ने प्रवृत्तिको भएकाले यस विषयमा जति धेरै चर्चा गरेपनि कम हुन्छ । कुरा मात्रले कुनै लछारपाटो लगाउने भए हामीले धेरै सकारात्मक कामहरू गरिसक्ने थियौं । जतिसुकै सचेतनाका कुरा आएपनि र जतिसुकै सकारात्मक कुराहरू सुनाइए पनि हामीले भने आप्mनो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने सवालमा पछाडि नै परिरहेको यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्दा होलीको सामूहिकतामा कतिको असर पर्ला ?
समूहमा नमनाउँदा होली मानेजस्तो होला कि नहोला ? सामान्य दृष्टिमा र होलीको परम्परागत पृष्ठभूमिलाई यदि हेर्ने र विचार गर्ने हो भने समूहमा नखेलिएको होली फिक्का नै हुन्छ । होली नै नभएको होलीजस्तो हुन्छ । होलीमा त हुर्दङ हुन्छ भन्ने मान्यता छ । साथीभाइसित हुर्दङ गर्न पाइएन भने होलीको मज्जै हुँदैन तर सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा देखिएका सचेतता, सल्लाह तथा उत्सुकताहरूले गर्दा होलीको निर्बन्धपन तथा खुल्लापनमा कप्mर्यू लगाएको अनुभूति लागिरहेको छ । एक ठाउँमा धेरैजना भेला हुन नहुने किसिमका सन्देशहरूले गर्दा होलीको भेलामा प्रतिबन्ध नै लगाएको धेरैलाई भइरहेको छ । हुन पनि हो, होलीको मौलिकता नै समूहमा गाउने, नाच्ने, खाने, पिउने र रमाइलो गर्ने हो तर धेरैजना भेला हुँदा कोरोनाको सङ्क्रमणको खतरा पनि रहेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमणको खतराले गर्दा सभा, भेला, सम्मेलन तथा पार्टीहरू रोकिएका खबरहरू आइरहेका छन् । पर्यटन वर्ष पनि प्रभावित भइसकेको छ । बजारमाथि असर पुगेको छ । विद्यालय र क्याम्पससम्म पनि कोरोनाको डरले सताइरहेको छ । यसले होलीलाई पनि प्रभावित नपार्ला भन्न सकिन्न । कतिपयले भन्न थालिसकेका छन् कि यसपालिको होलीमा सकेसम्म समूहबाट बच्ने प्रयत्न गर्छु । होलीको समयमा हुने खानपानमा पनि धेरै हदसम्म कोरोनाले मुखौटा लगाइदिने डर पनि रहेको छ । कतिपयले घोषणा नै गर्न थालिसके कि यसपालिको होलीमा माछा र मासु खाँदिनँ भनेर ।
कोरोनाले होलीको मनोविज्ञानमा प्रभाव पारिरहेको छ । मनोविज्ञानको सिद्धान्तले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ कि मनोविज्ञान प्रभावित भएमा काम पनि प्रभावित हुन्छ । होलीको मनोविज्ञानमा केही प्रभाव परिसकेको छ । यसले गर्दा होली प्रभावित हुने निश्चित भइसकेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा त खासै प्रभाव नपर्ला तर शहरी प्रौढको होलीमा भने कोरोनाको त्रास देखिने करीब निश्चित छ । होलीको लागि सरसामान किन्न ठूला बजारमा जान शिक्षित प्रौढहरू डराइसकेका छन् । कहाँ, कहिले र कसबाट आपूmमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन पुग्ला भन्ने संशय, भय र आशङ्कामा सर्वसाधारण बुद्धिजीवी सतर्क हुन थालेका छन् । सतर्कताले दैनिकी प्रभावित पारिसकेको छ । मुस्कुराएर हात मिलाउनेहरू अब भेट हुनासाथ अलिकति टाउको निहु¥याएर दुवै हात जोडी प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन गर्न थालेका छन् ।
खुला सांस्कृतिक उत्सवको उत्कर्षको रूपमा देखिने होलीमा विकृति बढ्दै गएको र परम्परागत होली बिस्तारै लोप हुँदै गएको अवस्थामा कोरोनाको प्रभावले यो सांस्कृतिक उत्सव केही फरक किसिमले प्रहार खप्न तयार छ ।
समूहमा पनि सतर्क रहन नसकिने होइन । समूह भनेको धेरै ठूलो होइन, अत्यन्त परिचित र विश्वासयोग्य दुई/चार जना एक ठाउँमा होलीको रमाइलो गर्न सम्भवतः त्यत्ति अप्ठ्यारो नहोला तर अत्यन्त निकटका साथी भनी भर्खर विदेशबाट फर्केर आएका छन् भने अझ धेरै बढी सतर्क हुनै पर्दछ । सतर्कता वा सजगतालाई नै यस होलीको शर्त मान्नुपरेको छ । जुन किसिमको सावधानी सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा आएको देखिएको छ, त्यसलाई यस होलीमा आचरण बनाउने प्रयास भने सर्वत्र हुनुपर्दछ । सम्भव भएसम्म बुद्धिजीवीहरूले सतर्कतालाई व्यापक बनाउन आप्mनो क्रियात्मक भूमिका खोज्नुपर्दछ ।
होलीको सुरुआत कहिलेदेखि भयो ? कुन परिवेशमा भयो ? कसरी विस्तार भयो ? होलीमा भित्रिएका विकृतिहरू के के हुन् ? पाँच दशक पहिले र अहिलेको होलीमा के कति भिन्नता छन् ? होलीको सांस्कृतिक पक्ष कस्तो छ ? होलीको इतिहास र वर्तमानबारे यसपालि खासै बहस हुन सकेको छैन ।
साहित्यमा प्राज्ञिक गतिशीलता
on 10:15:00 PM0Comment
संसार गतिशील छ । संसारको ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा निरन्तर प्रगति भइरहेको छ । प्रगति भन्नु पनि गति नै हो । जहाँ कुनै स्थिरता रहन्छ भने त्यहाँ कुनै प्रगति पनि रोकिएको हुन्छ भन्दछन् । तर यसले राजनीतिक स्थिरतालाई समेट्दैन । यसमा पनि विवाद होला तर सामान्य मान्यता के छ भने राजनीतिक स्थिरताले अन्य धेरै कुरामा गतिशीलता ल्याउँछ । यदि राजनीतिक अस्थिरता भयो भने धेरै किसिमको गतिशीलता कम हुन्छ । फेरि राजनीति र सरकार केही फरक हुन सक्छ । यस अर्थमा कुनै देशको राजनीतिक वातावरण अस्थिर हुँदा वा नहुँदाको परिस्थितिलाई छोडेर समाजमा हुने परिवर्तनलाई विचार गर्ने हो भने सामाजिक परिवर्तन भन्नु चाहिं गतिशीलता हो ।
कतिपयले दोहोरो चरित्र देखाउँछन् । एकातिर समाजमा विकास र परिवर्तन चाहन्छन् र अर्कोतिर परिवर्तन भयो भने पहिलोको समाज राम्रो थियो भन्दछन् । पहिले नै समाजमा परिवर्तन हुनुहुन्न भन्दैनन् । समाजमा भइरहेको परिवर्तन म रोक्न चाहन्छु भन्दैनन् । समाजमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने र परिवर्तन हुनुभन्दा पहिलेको समाज राम्रो थियो, अहिलेको समाज बिग्रियो भन्ने रोदन कतिपय प्राज्ञिक व्यक्तिले पनि रोएको पाइन्छ । हो, समाजमा भइरहेको परिवर्तनमा आप्mनो भूमिका छ वा छैन भन्ने विचार गर्नु पनि पर्दछ । कतिपय परिवर्तन स्वाभाविक हुन्छ र कतिपय परिवर्तनमा चाहिं हस्तक्षेप हुन्छ । मुख्यतया हरेक भौतिक परिवर्तन हस्तक्षेपकारी हुन्छ तर अभौतिक परिवर्तनमा व्यक्तिको भूमिका त्यति सक्रिय हुँदैन । यद्यपि समाजले पनि परिवर्तनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यी सबैको अन्तर्य यही हो कि समाज परिवर्तनशील छ ।
समाजमा भइरहने परिवर्तन जीवनको हरेक क्षेत्रमा देखा पर्दछ । समाजका अभिन्न अङ्ग जीवनपद्धति, कला, साहित्य, सोच्ने तरीका तथा अभिव्यक्तिका अन्य अङ्गलाई पनि विचार गर्न सकिन्छ । यथार्थमा वाङ्मयमा नै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ तर आप्mनो अतीत अर्थात् विगतको भोगाइ, अनुभूति, देखाइप्रति जनसामान्यको विकराल मोह हुन्छ । त्यो मोहले विगतप्रति आत्मिक आकर्षण उत्पन्न गर्दछ तर भौतिकतामा जान सम्भव हुँदैन । यस कारण कहिलेकाहीं द्वन्द्वात्मक विचार सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । विचारमा कोलाजपन देखिन्छ । विचारको कोलाज पनि प्राज्ञिक दृष्टिले गतिशीलता हो । वैज्ञानिक दृष्टिले पनि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको परिचायक हो । दृष्टान्त हो । यसलाई अझ फराकिलो विचार र दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकिन्छ ।
यदि नितान्त कला र साहित्यलाई पनि विचार गर्ने हो भने पनि यो गतिशील देखिन्छ । कला र साहित्यमा संरचना र विचार दुवै दृष्टिले गतिशीलता देखिन्छ । रूपलाई महŒव दिने र सारलाई महŒव दिने तथा सारलाई महŒव दिने र रूपलाई महŒव नदिने गरी कम्तीमा दुई ध्रुव शताब्दीयौंदेखि अस्तित्वमा छन् । समन्वयवादीहरूले रूप र सार दुवैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने विचार पनि व्यक्त गर्दै आएका छन् । दुवैको संयोजनबाट उत्कृष्ट साहित्यको सिर्जना हुने र बताउँदै आएका छन् । उदाहरण दिन्छन् र प्रमाणित पनि गर्दछन् । यहाँ पनि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद लागू हुन्छ ।
साहित्यमा प्रचलित विचार धारणलाई हेर्ने हो भने साहित्य र समालोचना दुवै क्षेत्रमा अनेक वाद र विवादहरू प्रचलनमा रहेका छन् । अनेक वाद र विवादले पनि साहित्यलाई गतिशील बनाएको छ । यसले प्राज्ञिक गतिशीलतामा वृद्धि गरेको छ । साहित्यिक वादहरूको इतिहास हेर्ने हो भने उही साहित्य केका लागि ? भन्ने प्रश्नको वरिपरि कम्तीमा एक फन्को लगाउनुपर्ने गरी जवाफ पाइन्छ । साहित्य, जीवनको लागि लागि हो कि साहित्यचाहिं साहित्यकै लागि ? हो, कतिपयले भन्ने गर्दछन् साहित्यचाहिं साहित्यकै लागि हुनुपर्दछ । यसलाई जीवनसित गाँस्नु आवश्यक छैन र कतिपयको मान्यता हुन्छ कि साहित्य र कला चाहिं जीवनका लागि नै हुनुपर्दछ । किनकि जीवन नभएको साहित्य र कलाले मानवसमाजलाई सभ्य बनाउन सक्दैन, सुसंस्कृत बनाउन सक्दैन । साहित्य कसका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तरमा पनि दुई ध्रुव देखिनु स्वाभाविक हो ।
समाजमा विचार दुई थरीका हुन्छन् भन्ने मान्यता नराख्ने कोही पनि नहोलान् । जसले कहीं पनि राजनीति देख्दैन, उनले पनि राजनीति गरेको देख्नेहरू हुन्छन् भने साहित्यमा प्राज्ञिक गतिशीलता हुँदैन भन्ने मान्यता आपैंmमा कमजोर हुन्छ । जुन पानी गतिशील हुँदैन, त्यो कालान्तरमा आपैंmमा फोहोर हुन्छ । जुन वाद वा सिद्धान्त गतिशील हुन्न त्यो आपैंmमा कमजोर हुन्छ र अन्तमा मृत्यु हुन्छ । गतिशील हुनुको अर्थ हो, उसमा जीवन छ, उसमा सङ्घर्ष गर्ने क्षमता छ, उसमा नवीनता सिर्जना गर्ने अनुकूलता छ । यस अर्थमा साहित्यमा प्राज्ञिक गतिशीलता चाहिन्छ र हुनु पनि पर्दछ । तर प्राज्ञिक गतिशीलताको अर्थ द्वैध चरित्र होइन र न त अद्वैतवाद नै हो । साहित्यमा प्राज्ञिक गतिशीलताको विश्वव्यापी दृष्टान्तलाई विचार गर्ने हो भने सारवाद, ध्वनिवाद, रीतिवाद, वक्रोक्तिवाद, औचित्यवाद, अलङ्कारवादजस्ता सिद्धान्तहरूलाई अब प्राचीन धरोहर मान्न थालिएको छ । साहित्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि नीतिपरक समालोचना प्रणाली, समाजपरक समालोचना प्रणाली, मनोविज्ञानपरक समालोचना प्रणाली, रूपपरक समालोचना प्रणाली, आदिमतापरक समालोचना प्रणालीहरूले समाजलाई समयानुकूल गतिशील बनाएकै हुन् । अझ गहिरिएर विचार गर्ने हो भने यी सबै समालोचना प्रणालीभित्र पनि आन्तरिक गतिशीलता भएको पाइन्छ । पाश्चात्य साहित्यको अध्ययन गर्दा शास्त्रीयतावाद/ परिष्कारवाद, नवपरिष्कारवाद, स्वच्छन्दतावाद, यथार्थवाद, अतियथार्थवाद, प्रगतिवाद, प्रकृतवाद, प्रतीकवाद, अस्तित्ववाद, विसङ्गतिवाद आदिले पाश्चात्य साहित्यलाई गतिशील बनाएको देखिन्छ। कतिपयले आधुनिकतावाद, उत्तरआधुनिकतावादको चर्चा र विश्लेषण पनि गरेका छन् । वर्तमान विश्वमा डायस्पोरिक लेखनले पनि एक किसिमको तहल्का मच्चाइरहेको छ । एउटै विचार, सिद्धान्त वा वादभित्र संशोधन गर्नुपर्ने विचारकलाई संशोधनवादी मान्ने गरिएको अर्को यथार्थले पनि साहित्यमा प्राज्ञिक गतिशीलता थपेकै छ ।
साहित्य सिर्जना हुन्छ । सिर्जना गतिशील हुन्छ । साहित्यमाथि समालोचना हुन्छ । समालोचनाको दृष्टिकोण पनि गतिशील हुन्छ । एउटै साहित्यमाथि अनेक वैचारिक दृष्टिकोणले समालोचना हुन सक्ने भएकोले साहित्यमा प्राज्ञिकताको औचित्य हुन्छ र साहित्यमा प्राज्ञिक विविधताजस्तै प्राज्ञिक गतिशीलताको पनि आवश्यकता हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।
के छ पतौराको पुरातात्विक वास्तविकता ?
on 5:37:00 PM0Comment
ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूले स्पष्ट केही पनि भन्दैनन् तर पतौराको भग्नावशेषले स्पष्ट नभन्ने सबैलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
नजीकै सिम्रौनगढ रिसाइरहेको छ । सिम्रौनगढले यस क्षेत्रकै इतिहास खोलेको छ । अलि परको ईशनाथ महादेव मन्दिरले पनि इतिहास बोलेकै छ । तर मौलापुर नगरपालिकाको पतौराबारे सबैतिर किन मौनता ?
इतिहासले भन्छ – इस्वी सन् १०९७ मा डोय राज्यको स्थापना भएको थियो । दक्षिण भारतको कर्नाट देशबाट आएका नान्यदेवले सिम्रौनगढलाई राजधानी बनाई डोय राज्य स्थापना गरेका थिए । नान्यदेव दक्षिण भारतका चालुक्य शासकका सेनापति थिए । सेनापति नान्यदेवले डोय राज्यको स्थापना गरेका थिए । डोय राज्यमा नान्यदेवपछि गङ्गदेव, गङ्गदेवपछि नरसिंहदेव, रामसिंह देव, शक्तिसिंह देव, भूपालसिंह देव तथा हरिसिंह देवले शासन गरेको इतिहास छ । दिल्लीका बादशाह गयासुद्दीन तुगलकले डोय राज्यमा आक्रमण गरी ध्वस्त पारेपछि डोय राज्यका सातौं राजा हरिसिंह देव आप्mनो राज्य छाडी भागेका थिए । हरिसिंह देवले शासन छोडी भागेपछि तुगलकले कामेश्वर ठक्कुरलाई शासक नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि ठक्कुर वंशको पनि शासन चलेको पाइन्छ ।
तुगलकले आक्रमण गरेको वर्ष भने सन् १३२४ हो । सामान्य ऐतिहासिक विश्वास के छ भने तुगलकको आक्रमणबाट सिम्रौनगढको भौतिक संरचना तहसनहस भएको थियो । सिम्रौनगढको समृद्धि खलबलिएको थियो र सिम्रौनगढ उजाड भएको थियो । सिम्रौनगढ समग्रमा ध्वस्त भएको थियो भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ ।
सिम्रौनगढमा राजधानी त्यत्तिकै स्थापना भएको थिएन होला । त्यहाँको भौतिक संरचना वा कूटनैतिक महŒव वा सामरिक महŒव त्यस जमानामा केही थियो र त त्यहाँ राजधानी बनाइएको थियो । तुगलकको आक्रमणपछि सिम्रौनगढ पूर्णरूपमा ध्वस्त नै हुन पुगेको थियो भन्ने कुरा ठक्कुरले पुनः राज्यको शासन तुगलकबाट लिएकोबाट देखिन्छ । यहाँनेरको अँध्यारोले पनि केही बोल्नुपर्ने हो ।
डोय राज्य स्थापना भएको वर्षलाई विक्रम संवत्मा ११५४ मानिएको छ । डोय राज्यको स्थापना हुनुभन्दा करीब चार दशक पहिले वि.सं.११४ मा औरैयामा ईशनाथ महादेवको स्थापना भएको ऐतिहासिक तथ्य रहेको छ । जसरी सिमरावनबाट सिमरौनगढ वा सिम्रौनगढ भयो त्यस्तै अमलाको वन भएको ठाउँ औरावनबाट औरैया हुन गएको हो । बकैया नदीको पश्चिमी किनारमा स्थापना भएको महादेव मन्दिरसँग सम्बन्धित अनेक किंवदन्तीहरू त्यस आसपासमा अद्यापि प्रचलनमा छन् । ईशनाथ महादेवको पुरानो मन्दिरको भग्नावशेष अझै पनि देख्न सकिन्छ ।
सिम्रौनगढ स्थापना भएको समयभन्दा केही दशकपहिले स्थापना भएको मन्दिर अहिले पनि अस्तित्वमा छ र सिम्रौनगढको संरचना चाहिं ध्वस्त भएको छ । अझ स्पष्ट भन्ने हो भने पुराताŒिवक महŒवका दुवै स्थानको स्थापनाको इतिहास देखिन्छ,् तर पतौरा महादेवबारे सबैतिर मौनता किन ?
एकजना जानकारको अभिमत कस्तो छ भने डोय राज्य ध्वस्त भएको केही समयपछि पतौरामा महादेव मन्दिरको स्थापना भएको हो र यहाँ केही शताब्दीसम्म पूजा चलेको हो र पृथ्वीनारायण शाहको समयमा पतौरा मन्दिरलाई ध्वस्त पारिएको हो । पतौरा मन्दिरलाई पृथ्वीनारायण साहका मान्छेहरूले किन ध्वस्त पारे ? ती जानकारको अभिमत छ– पतौरा र आसपासका बासिन्दा पृथ्वीनारायण शाहका पक्षमा थिएनन् रे । यहाँका बासिन्दा सेनवंशका समर्थक थिए रे । पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर आप्mनो राज्यमा मिलाएपछि यहाँका बासिन्दाले पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा स्वीकार गरेका थिएनन् । राजा नस्विकारेको कारणले उनको सेनाले यस क्षेत्रमा आक्रमण गरे र मन्दिरमा लुकेका स्थानीयलाई लखेट्ने क्रममा मन्दिर नै ध्वस्त पारे रे । मन्दिर ध्वस्त भयो र यो क्षेत्र पूरै मानवविहीन बन्न पुग्यो । कालान्तरमा फेरि बस्ती बस्न पुगी करीब दुई वर्ष पहिले मन्दिरको अवशेष फेला परेको हो ।
यस तर्कलाई विभिन्न किसिमले विश्लेषण गर्दा तथ्य अर्कै हुनुपर्ने सङ्केत प्राप्त हुन्छ । पतौराको पुराताŒिवक उत्खनन भएको छ र उत्खननले प्रारम्भिकरूपमा के देखाएको छ भने यो मन्दिर कर्नाटकालीन हो । कर्नाटकालीन भन्नु चाहिँ डोयकालीन भन्नु नै हो । पृथ्वीनारायण शाहको समय भनेको त्यस्तै साढे दुई सय वर्ष पुरानो हो । धरतीभन्दा करीब बाइस फिट गहिरोसम्म मन्दिरको संरचना भेटिएको छ । यति गहिरोसम्म सिम्रौनगढमा मन्दिर वा पुराताŒिवक संरचना भेटिएको कसैलाई थाहा छैन । यदि हो भने तथ्य बाहिर आउला तर साढे दुई सय वर्षमा नै कुनै संरचना बाइस फिट गहिरो भासिन सक्ला र ? पतौरा र यस आसपासको बस्ती नै साढे दुई सय वर्षभन्दा पुरानो छैन भन्ने पनि स्पष्ट पार्दछ । तर वास्तविकता यो होइन । वास्तवमा पतौरा भन्ने बस्ती साढे दुई सय वर्षभन्दा पनि कैयौं शताब्दी पुरानो हो भन्नेमा शङ्का छैन।
जब लोकमानसमा सिम्रौनगढ ध्वस्त भएको कुरा इतिहासको पुस्तकमा लेखिएको भन्दा पुरानो भनी व्याप्त छ, जुन सन् १३२४ को घटना हो । सिम्रौनगढ ध्वस्त भएको करीब सात सय वर्ष हुन लागेको छ तर जम्मा साढे दुई सय वर्ष पहिले ध्वस्त भएको पतौरा महादेवको मन्दिरबारे न कुनै किंवदन्ती प्रचलनमा छ, न लोकमानसमा यसको इतिहासको कुनै अवशेष नै छ । यसले के स्पष्ट हुन आउँछ भने पतौरा मन्दिरको इतिहास अन्य क्षेत्रको इतिहासभन्दा अझ पुरानो छ ।
मन्दिरको आसपासको जग्गाजमीन र केही घरहरू माली जातिको रहेको पाइएको छ । करीब दुई दशक पहिले मन्दिरको संरचना भेटिएको र पुराताŒिवक उत्खननले हजारौँ वर्ष पहिलेको भएको सम्भावना व्यक्त गरिरहेको वर्तमानमा यसको पुराताŒिवक वास्तविकता अझ बाहिर आउन बाँकी नै छ । यहाँको मूर्तिकला, ईंटाको संरचना तथा अन्य तथ्यहरूले यहाँ कुनै प्राचीन सभ्य र भव्य बस्ती रहेकोतर्फ सङ्केत गर्दछ । कुनै प्राचीन बस्तीको विलुप्त अवशेष फेला पर्न सक्ने सम्भावनाले नयाँ किसिमले मानव सभ्यताको अध्ययनको ढोका पो खोल्ने हो कि ? यस विषयमा पुरातŒव विभागले नयाँ तथ्य सार्वजनिक गर्ला । सर्वसाधारण जान्न अत्यन्त उत्सुक छन्– आखिर के छ पतौराको पुराताŒिवक वास्तविकता ?
विसं २९६६ को सिम्रौनगढ
on 11:33:00 PM0Comment
मधेसको एउटा प्राचीन बस्तीमध्ये सिम्रौनगढलाई पनि मानिन्छ । सन् १०९७ मा तत्कालीन दक्षिण भारतको कर्नाट देशका सेनापति नान्यदेवको नेतृत्वमा आएको फौजले यहाँ राजधानी बनाइ डोयराज्य स्थापना गरेको थियो । वेदको समयभन्दा पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा यो क्षेत्र रहेको छ भन्ने कुरो कसरी प्रमाणित हुन्छ भने यस क्षेत्रलाई तीरभुक्ति भनिएको छ । त्यसै हुनाले तीरभुक्तिको अपभ्रंश भएर कालान्तरमा तिरहुत पनि भनिएको पाइन्छ । तिरहुत शब्दसँग सम्बन्धित विभिन्न स्थान कोशीदेखि पश्चिम र नारायणीदेखि पूर्व तथा चुरेदेखि दक्षिण र गङ्गादेखि उत्तरको भूभागमा अहिलेसम्म पनि अस्तित्वमा रहेको सम्भवतः यसै कारणले हो ।
तत्कालीन दिल्लीका बादशाह ग्यासुद्दीन तुगलकले सन् १३२४ मा आक्रमण गरेर सिम्रौनगढलाई तहसनहस पारेको इतिहास पाइन्छ ।
सम्भवतः सिम्रौनगढलाई यही अवधिको मानेर अध्ययन गरिन्छ । सिम्रौनगढको इतिहास यही अवधिको मात्र हो ? यसपछिको ठक्कुर वंशको शासनको बारेमा अलिकति जानकारी पाइन्छ तर नान्यदेवको समयभन्दा पहिलेको इतिहासको बारेमा खासै कोही जान्ने इच्छा राख्दैनन् वा उताको इतिहासको विषयमा कसैलाई सोच्ने फुर्सद नै छैन । वास्तवमा नान्यदेवले सिम्रौनगढलाई यत्तिकै किल्ला त बनाएनन् ? यस ठाउँलाई राजधानी बनाउनुका पछाडि यस ठाउँमा बस्ती थियो वा उन्नत बस्ती थियो वा सामान्यतया त्यस युगको लायक पूर्वाधारको विकास भइसकेको थियो । त्यत्तिकै मानवशून्य ठाउँमा त सिम्रौनगढ बसाइएन कि?
विभिन्न शास्त्रहरूमा सिम्रौनगढलाई सिमरावन पनि भनिएको पाइन्छ । सिमरावन भनेको सिमलवन हो । सिमल एउटा रूख हो । सिमललाई स्थानीय बज्जिका भाषामा सिमर वा सेमर भनिन्छ । यसलै आजसम्म पनि यस ठाउँलाई सेम्रौनगढ वा सिम्रौनगढ पनि भनिन्छ । सिम्रौनगढको इतिहासको अध्ययन गर्दा अब नान्यदेवले यहाँ राजधानी स्थापना गरेको समयभन्दा पनि पहिलेको बस्ती वा मानव समुदायको अवस्थाको बारेमा पनि अध्ययन हुनुपर्छ ।
सिम्रौनगढको ऐतिहासिकतालाई पुष्टि गर्ने अनेक प्रमाणहरू छँदैछन् । विभिन्न सरकारी अध्ययन र इतिहासको विभिन्न पुस्तकले सिम्रौनगढको बारेमा अनेक बखान गरेका छन् ।
सिम्रौनगढको ऐतिहासिकतालाई त्यहाँ रहेको एउटा बोर्डले पनि स्पष्ट पारेको छ । सिम्रौनगढको इशरा पोखरीको पश्चिमतिर किनारमा कङ्काली मन्दिर रहेको छ । यहाँ कङ्काली मन्दिरको निर्माण कसले गरेको हो, कसरी भएको हो भन्ने विषयमा यस क्षेत्रमा एउटा किंवदन्ती रहेको छ प्रचलनमा । तर अहिले रहेको मन्दिरको निर्माण चाहिं कम्तीमा एक सय वर्ष पहिले राणाशासनको समयमा भएको हो मानिन्छ । यस मूर्तिको प्राचीनतालाई पनि यदि विचार गर्ने हो भने यसले कैयौं व्यवस्थालाई देखेको छ भन्दा हुन्छ । यस मन्दिरभित्रको मूर्ति करीब आठ सय वर्ष पुरानो रहेको मानिन्छ । यस मन्दिरले सिम्रौनगढको प्राचीनतालाई पुष्टि गर्ने आधार थपेको छ । अन्य अनेक आधारहरू पनि यहाँ रहेका छन् ।
मन्दिरको छेउमा रहेको एउटा बोर्ड छ । बोर्डको भाषाले पनि यसलाई प्राचीन बताउने प्रयास गरेको छ तर यसको भाषामा देखिएको एउटा त्रुटिले शायद यसको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको जस्तो छ । सिम्रौनगढ क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति वीरगंज लेखिएको छ । यसै संस्थाले बोर्ड लेखाएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । बोर्ड अलि खुइलिएको अवस्थामा पुगिसकेकोले बोर्ड अलि पुरानै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ ।
कङ्काली मन्दिर, सिम्रौनगढ भनेर सिरानमा लेखिएको बोर्डको तेस्रो बुँदामा यस मन्दिर क्षेत्रको उत्खननको इतिहास बताउने प्रयास गरिएको छ, जसमा भनिएको छ– यस मन्दिर क्षेत्रमा विसं १९३५, विसं २९६६ र विसं २०५१ मा उत्खनन गरिएको थियो ।
यहाँ सामान्यता सन्देह गर्न नमिल्ने तथ्य भनेको यसमा लेखिएको विसं २९६६ को ठाउँमा विसं १९६६ हो । सामान्यतया पढ्नेले पनि यही नै पढ्ने गर्दछन् । तर जहाँ इतिहास र तथ्यको सवाल हुन्छ, त्यहाँ त यसले निकै फरक पर्न सक्छ । यस पङ्क्तिमा प्रयोग गरिएका तीनवटै मितिको अगाडि विसं लेखिएको छ । अघिल्लो र पछिल्लो दुवै मितिलाई पत्याउने अवस्था छ तर बीचको मिति आउन अभैm सयौं वर्ष बाँकी छ । त्यहाँ मूर्तिको प्राचीनता लेखिएको करीब आठ सय वर्षभन्दा बढी समय त अभैm आउनै बाँकी रहेको यस मितिले देखाएको छ । इतिहासको अध्ययन र अनुसन्धानको दृष्टिले यसलाई पत्याउन मुस्किल बनाइदिएको छ एउटै तथ्यले ।
बोर्ड लेख्ने संस्था वा पर्यटक वा यहाँका स्थानीयको ध्यान नगएको हुन सक्छ वा ध्यान गए पनि सच्याउनेतर्पm ध्यान नगएको हुन सक्छ । वास्तवमा यस क्षेत्रको भ्रमण र अध्ययन गर्न आउने नयाँ विद्यार्थीलाई भने यस तथ्यले अलिकति भ्रम उत्पन्न गर्न सक्छ ।
जहाँ इतिहासको सवाल हुन्छ, त्यहाँ अझ बढी गम्भीर हुनु जरुरी हुन्छ । यदि कुनै शिलालेखमा यही किसिमको त्रुटि हुन पुग्छ भने त्यसको अध्ययनले कति असर उत्पन्न गर्न सक्ला ? बोर्ड तथा ब्यानर लेख्ने र लेखाउनेहरूले अलिकति लापरवाही गर्दा वा निगरानी गर्नेले समयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन नसक्दा अध्ययनमा कति प्रभाव पर्दछ भन्ने बलियो उदाहरण यो बोर्ड हुन गएको छ ।
यदि यो बोर्डमा लेखिएको कुरो सही नै हो भने पनि कसरी सही हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । वास्तवमा यसको मितिलाई सच्याउनु उचित हुन्छ वा यसलाई अझ स्पष्ट पारेर यसको मिति सर्वसाधारणले बुझिने पनि हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । यदि यो मिति लेखिनमा त्रुटि हुन पुगेको हो भने सम्बन्धित पक्षले सकेसम्म छिटो सच्याउँदा राम्रो होला कि जस्तो लागेको छ । हैन भने नौ सय वर्ष पहिलेको इतिहास बताएको हो कि नौ सय वर्षपछिको भन्ने बुभ्mन साधारण पाठकलाई निकै गा¥हो बनाएको छ ।
जङ्गबहादुर राणासित रौतहटको पर्यटन
on 10:22:00 PM0Comment
नेपालको इतिहासमा जङ्गबहादुर राणाको आप्mनै महŒव र इतिहास रहेको छ । देशलाई एक सय चार वर्षे आप्mनो पारिवारिक शासनमा राख्न सफल जङ्गबहादुरको नाम देशको इतिहासले कदापि बिर्सन सक्दैन । आप्mनो युगको अत्यन्त शक्तिशाली शासकको रूपमा चिनिएका जङ्गबहादुर राणाबाटै राणाशासनको आरम्भ भएको थियो । कतिपय इतिहासकारले नेपालका प्रमुख तीन शासकमा पृथ्वीनारायण साह, भीमसेन थापा र जङ्गबहादुर राणालाई मान्ने गरेका छन् । देशको राजनीतिले निकै कोल्टो फेरिसकेको छ तर पनि जङ्गबहादुर राणालाई देशको राजनीतिले बेलाबेलामा सम्झिने गरेको छ ।
अहिले नेपाल पर्यटन वर्षको समय छ र नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै किसिमका पर्यटकलाई देशको कुनाकुनामा पु¥याउन विभिन्न किसिमले प्रयास गरिंदैछ । यसैक्रममा रौतहटको पर्यटनमा जङ्गबहादुर राणाको करिडोरलाई समेट्न खोजिएको छ ।
जङ्गबहादुर राणाको इतिहास धेरै पुरानो छैन । राणा प्रधानमन्त्रीको बारेमा धेरै कुरा ज्ञात छ । यसैले उनीसित सम्बन्धित धेरै कुरा अहिले पनि साक्ष्य छन् । उनै जङ्गबहादुर राणाको सम्बन्ध रौतहटसित रहेको छ । रौतहटसित उनको सम्बन्ध गहिरो रहेको छ र उनको आत्मीय र हार्दिक सम्बन्ध रहेको विभिन्न दृष्टान्तहरूले देखाएका छन् । उनले आप्mनो अन्तिम सास यहीको हावामा पिंmजाए र उनको शरीरलाई यहीको काठले भस्म बनायो, यहीको हावामा उनको शरीरको धूवाँलाई पचायो, उनको शरीरको अस्तु यहीको माटोमा मिल्यो ।
तत्कालीन श्री ३ राणा बारम्बार रौतहट आउने, लामो समय रौतहट बस्ने, शिकार गर्ने र कतिपय अवस्थामा देश सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देश र आदेश जारी गर्ने गरेको उल्लेख पनि पाइन्छ । रौतहटको बसाइँमा उनीसित सम्बन्धित केही स्थानहरू अहिले रौतहटको पर्यटनको विकासका लागि सकारात्मक योगदान दिन सकिने सम्भावनाका क्षेत्र बनेका छन् ।
राणाशासनप्रति सम्पूर्णतः नकारात्मक दृष्टिकोण वर्तमान समाजले राखेको भएपनि जङ्गबहादुरले गर्मी महीनामा नुहाउने गरेको ठाउँलाई आज स्थानीयले जङ्गे झरना भनी नामकरण गरेका छन् । यो झरना सम्भवतः प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो झरना पनि हो ।
नेपाल भ्रमण वर्षको अवसरमा प्रदेशमा कतै झरना नै छैन कि भन्ने भ्रम रहेको बेला चन्द्रपुर नगरपालिकाको झरना अत्यन्त चित्ताकर्षक रहेको छ । चन्द्रपुर नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने यो प्राकृतिक झरना पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा १२/१४ किलोमिटर उत्तरमा चुरे पहाडमा रहेको छ ।
के मान्यता रहेको छ भने जङ्गबहादुर रौतहटको जङ्गलमा पुगेको समय यही झरनामा पुगेर नुहाउने गरेका थिए । जङ्गलमा ठूलो हात्तीमा घुम्ने गरेका जङ्गबहादुरले चढ्ने हात्ती बाँध्ने ठाउँ वा हात्तीसार पनि त्यहाँ नजीकै थियो र अवशेष अहिले पनि छ । पूर्णतया प्राकृतिक वातावरणमा नुहाएपछि जङ्गबहादुर राणा पौराईमा अवस्थित ब्रह्मस्थानमा पूजा गर्दथे ।
दर्जनौं जिल्ला तथा भारतमा समेत प्रख्यात पौराईको ब्रह्मबाबाको बारेमा किंवदन्ती यो पनि छ कि यसको स्थापना जङ्गबहादुरले नै गरेका थिए । एक दिन शिकार खेल्नेक्रममा आप्mना सैनिकहरूबाट बिछोड भई एक्लै र एकान्त जङ्गलमा परेको बेला थकानले निदाएका जङ्गबहादुरले सपनामा देखेछन् कि बिहान नुहाएर यस ठाउँमा पूजा गरेपछि हराएका सबै सैनिकसित भेट हुनेछ । जङ्गबहादुरले त्यसै गरेछन् र भोलिपल्ट सपनामा देखेजस्तै सबै सेनासित भेट भएछ । पौराईको ब्रह्मस्थानको इतिहासको खोजी गर्दा अहिले पनि जानकारहरू जङ्गबहादुर राणासित यसको सम्बन्धलाई जोड्न पुग्छन् ।
नेपाल भ्रमण वर्षमा रौतहटका पर्यटकीय गन्तव्यमा जङ्गे झरना र पौराईको ब्रह्मस्थानलाई पनि समेटिएको छ । पौराईको ब्रह्मस्थानको महŒव यसरी पनि बढेको देखिन्छ कि पौराईको ब्रह्मस्थान भनी अन्य ठाउँमा मन्दिर स्थापना गरिएको र पूजा गर्ने गरिएको पाइन्छ । बर्सेनि हजारौं मानिस पौराईमा पूजा गर्न पुग्छन् तर जङ्गे झरना भने बिरान बन्न पुगेको छ । पूजा भन्ने कुरो आस्थासित सम्बन्धित रहेकोले यसको विस्तार भएको हुनुपर्छ र विभिन्न कारणले जङ्गे झरना बिरानो बन्दै गएकोमा अहिले पर्यटन वर्षको अवसरमा जङ्गे झरनाले पनि प्रचारको अवसर पाएको छ । जङ्गे झरना बिरानो बन्न पाउँदैन र यसको प्रचार हुन थालेपछि यहाँ फेरि मानिसहरू पुग्न थालेका छन् ।
जङ्गबहादुरले नुहाउने गरेको ठाउँ भएकोेले जङ्गे झरना भनिएको तथा पौराईको ब्रह्मस्थानलाई स्थापना गरेको, पूजा गरेको सन्दर्भसित जोडिएको हुनाले पर्यटनसँग जोडिएको छ । पर्यटनमा एक किसिमले जङ्गबहादुर करिडोर बन्न पुगेको छ ।
जङ्गबहादुरसित जोडिएको राजघाट पनि हो । जङ्गबहादुरले मृत्युवरण गरेको स्थान पनि छ । जङ्गबहादुर राणाले अन्तिम सासलाई हावामा मिलाएको ठाउँ वृन्दावन नपाको बागमती किनारलाई मानिन्छ । उनको समाधिस्थल बागमतीको बगरमा आज पनि कतै हुनुपर्छ । जङ्गबहादुरको स्मृतिमा एउटा गेट पनि निर्माण गरिएको छ । बागमती नदीतिर जाने बाटोमा निर्माण गरिएको जङ्गबहादुर द्वारले उनीसितको सम्बन्धलाई सम्झाउँछ । अहिलेसम्म राजघाट र अन्येष्टिस्थललाई पर्यटनसित जोड्न सकिएको छैन तर अहिले यो पनि आवश्यक भइसकेको छ कि वृन्दावनको विश्रामपुरनजीक रहेको बलेरीनजीक रहेको जङ्गबहादुर स्मृतिद्वारलाई पनि जङ्गबहादुर पर्यटन करिडोरमा समावेश गरियोस् ।
इतिहासमा धेरै कुरो प्रस्ट छ । यदि इतिहासको राम्ररी अध्ययन गर्ने हो र रौतहटमा जङ्गबहादुरको पहिलो आगमनको मिति, स्थान तथा अन्य आगमनहरूको पनि तिथिमितिसहितको एउटा विवरण सम्बन्धित स्थानहरूमा राख्ने हो भने पर्यटकलाई एकातिर इतिहासमा रुचि जगाउने र अर्कोतिर अन्य पर्यटकलाई तान्ने उपाय हुने देखिन्छ । हरेक पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा हरेक पर्यटकीय गन्तव्यको बारेमा ऐतिहासिकतासहितको जानकारी दिनुपर्छ । पर्यटन वर्षको दृष्टिकोणले यो सर्वथा उचित देखिन्छ ।
रौतहटमा ऐतिहासिक पर्यटनको सम्भावनाबारे धेरै खोजी जरुरी छ । पर्यटकलाई प्राचीनतासित जोड्ने हो भने अनेक प्राचीन इतिहास बोकेका महŒवपूर्ण स्थानहरू रहेका छन् । यस्ता ठाउँहरूको खोजी पनि भइरहेको छ तर स्थानीयलाई खासै मतलब छैन । आप्mनो ठाउँको ऐतिहासिक, पौराणिक तथा धार्मिक र पर्यटकीय स्थानहरूको बारेमा केही विशिष्ट मानिसहरूको चासो मात्र रहेको छ । चिन्ता कसैलाई पनि रहेको छैन । अबको समयमा यस्ता कुरालाई पर्यटनसित जोडेर सार्वजनिक महŒवको बनाइनुपर्छ ।
Archive September (330) August (605) July (627) June (578) May (571) April (536) March (388) February (297) January (356) December (320) November (365) October (338) September (377) August (403) July (415) June (394) May (406) April (361) March (312) February (381) January (344) December (217) November (182) October (176) September (197) August (199) July (232) June (250) May (212) April (209) March (199) February (213) January (213) December (238) November (208) October (194) September (213) August (198) July (207) June (234) May (224) April (234) March (232) February (274) January (317) December (305) November (255) October (269) September (287) August (241) July (272) June (276) May (265) April (243) March (266) February (253) January (206) December (206) November (233) October (212) September (274) August (228) July (203) June (191) May (218) April (213) March (191) February (209) January (225) December (245) November (184) October (163) September (164) August (178) July (173) June (169) May (168) April (177) March (194) February (161) January (208) December (198) November (149) October (148) September (175) August (201) July (208) June (200) May (218) April (168) March (193) February (194) January (202) December (226) November (186) October (231) September (229) August (199) July (197) June (160) May (192) April (199) March (276) February (627) January (235) December (183) November (158) October (139) September (144) August (149) July (130) June (142) May (132) April (133) March (107) February (139) January (160) December (158) November (132) October (149) September (185) August (166) July (154) June (135) May (33)